Heat Insulation Panel Aluminium Bi-mivalona Bifold Accordion Windows
Ny varavarankely mihodina alim-baravarana alim-baravarankely azo fehezina
Insulated Aluminium Double-glazed Windows varavarankely
Misy fiantraikany eo amin'ny tadin'ny vy ny tadin'ny tafio-drivotra amin'ny fitaratra lehibe
Ireo singa enina lehibe an'ny ACE ho an'ny Window Window
Mombamomba ny aliminioma: akora vita amin'ny aliminioma vaovao 100%, mombamomba ny alimina matevina, famolavolana lavaka siantifika
Fiasana: fivorivoriana zoro 45 ° fisaka, fahaiza-manao famehezana artifisialy tsara
Fametahana famehezana: kofehy famehezana EPDM, volon'ondry ambony mahery, lakaoly famehezana
Glass: fitaratra fitaratra roa mahazatra hampihenana ny hafanana sy ny tabataba
Fitaovana mitam-piadiana: marika ambony sy marika alemana sinoa miaraka amin'ny garantie 10 taona
Fitaovana: funtions fanampiny hamerenana ny bibikely sy ny tohatra
Safidy fitaratra: Afaka ny ho tokana glazed, glazed roa na afaka mifanaraka vera laminate matevina mba hahazoana insulate avo manohitra ny mari-pana sy ny tabataba. Double glazing koa dia mahatratra ny laharana avo indrindra amin'ny angovo sy ny insulation thermal.
Mombamomba ny kalitao: Famaritana avo lenta, fanoherana avo lenta amin'ny taratra UV, rivotra masira ary rivotra mahery, hery mahery vaika, tsy manimba na simba ary tsy misy fikojakojana ary porofo maharitra - haharitra mandritra ny taranaka maro.
Mampiasa aluminium izahay mba hanomezana endrika ivelany tsy misy fikojakojana manohitra ireo singa. Ny antsipiriany avo lenta sy ny fahaiza-manaony dia manome antsika ny fahaizana manome loko izay azonao eritreretina amin'ny endriny rehetra. Ny fizotran'ny mpisava lalana anay amin'ny famoahana ny aliminioma dia manome anao akanjo matevina sy matanjaka kokoa noho ny maro amin'ireo mpifaninana aminay.
Glass Standard Araho ny AS2208 / IGCC / CE / ISO
Standard / fanamarinana Araho ny AS2047 / CE / ISO
Fanamafisam-peo U sanda 1.5 ka hatramin'ny 2.0 W / M2k
Fotoana fitarihana santionany 7 andro
Fidirana rano 600 pa
Hery farany 4500pa
Tafiditra anaty rivotra 75/150
Firaka fampidirana 6063-T5 mombamomba miaraka amin'ny hatevin'ny 1.2-2.5 mm ho an'ny varavarankely
Hardware Marika ambony China; marika Alemanina misy antoka 10 taona
Fitsaboana ambonin'ny tany Voaravaka vovoka, Electrophoresis, PVDF, Anodizing, na loko hazo
Fonosana Kitapo hazo na baoritra misy kitapo bubble, sarimihetsika madio, sombin-javatra ao anatiny.
Delivery 15-35 Andro aorian'ny nanamafisana ny baiko
Mifandraisa amin'ny ekipan'ny Design mba hahazoanao teny nalaina manokana ary atombohy ny fizotran'ny injeniera ny varavarankely sy varavarana vaovao anao.
Amin'ny fandrefesana ny vata tokana dia afaka manome anao vidiny eo am-baravarankely sy varavarana ilaina ho an'ny tranonao sy ny habakao izahay! Aza manahy momba ny fametrahana mazava tsara amin'ity dingana ity izao, raha vantany vao vita ny teny nalaina, dia manangona ny sisa amin'ny fampahalalana ilaina ny ekipanay.
Ny vidin'ny rafitry ny varavarankely sy ny varavaranao dia ho faritana amin'ny haben'ny varavarankely sy varavarana ilainao, ary koa ny safidy farany safidinao.
Dingana 4: Fanamboarana varavarankely sy varavarana
Aorian'ny fankatoavana ny sarin'ny fivarotana, dia mamokatra any amin'ny orinasa any Foshan, Sina ny rafitry ny varavarankely sy ny varavaranao. Izahay dia manana fitaovana fanamboarana hazo, vy ary fitaratra ka afaka manamboatra ny faritry ny varavarankely sy ny varavaranao izahay.
Ny ifantohan'ny fizotrantsika dia ny fanaovana ny fizotry ny fametrahana ho tsotra araka izay azo atao.
Afaka nanao izany marimarina kokoa isika satria mifehy ny fizotran'ny injeniera ho an'ny rafitra iray manontolo, ary mahatonga ny fizotran'ny fametrahana ho asa tsotra.
Raha vantany vao noforonina ny rafitry ny varavarankely sy ny varavaranao dia halefanay hoso-doko sy fametrahana torolàlana momba ny fametrahana an-tserasera ity. Ny vokatray dia mora fametrahana DIY ary ny ankamaroan'ny tsy mila welding. Ny tetik'asa farany azo vitaina afaka andro vitsivitsy.
Teo aloha: Varavarana miharo volo zaridaina an-trano Villa
Manaraka: China namboarina tohatra tohatra vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo tohatra vita amin'ny vy mahitsy
Windows Windows Bi-Fold Windows